Nin malaayiin doolar oo deeq bixiyey kaddibna isdilay - BBC News Somali
Nin malaayiin doolar oo deeq bixiyey kaddibna isdilay
20 Agoosto 2019
Image caption Ninka isdilay Jeffrey Epstein
Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay Jeffrey Epstein inuu dardaarankiisa saxiixay inta uu iskudilin xabsi ku yaalla New York laba maalmood ka hor.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay warqadda dardaaranka ninkaasi oo saxiixan in maxkamadda jasiiradda Virgin ee dalka mareykanka lagu soo bandhigay uu ninkaasi ku sheegay maal ka badan $577 milyan oo doolar inuu ninkaasi oggolaaday inuu qasanadda dowladda lagu shubo balse ma sheegin cidda deeqdaasi uu bixiyey uu doonayo in looga faa'ideeyo.
Wargeyska New York Post oo soo xigtay warqadda dardaaranka uu Jeffrey Epstein qoray soo xigtay waxay sheegeen inuu ninkaasi daradaarankiisa ku muujiyey in lacagtaasi deeq ahaan qasnadda dowladda lagu shubo.
Epstein wuxuu dhintay isaga oo sugaya in lagu qaado dacwad la xiriirta inuu suuq geyn jiray dadka jirkooda ka ganacsada isla-markaana uu shirqoolna fulin jiray.
Dhakhtar caafimaad oo ku sugan New York oo meydka ninkaasi baaritaan caafimaad ku sameeyey wuxuu sheegay ninkan dhintay ee 66 jirka ah inuu isku dilay "daldalaad".
Epstein inta uu noolaa wuxuu sheegay inuusan dambiyadaa lagu eedeeyey uusan gelin uuna xirnaa isaga oo aan loo oggolaan inuu dammiin la yimaaddo.
Masaari lagu xukumay dil
Ninkan oo ahaa maalgeliye hore dhammaan lacagihi akaawunkiisa ugu jirtay wuxuu ku shubay akaawunka sanduuqa 1953, sida ay sheegeyso nuqul warqadda dardaaranka ninkaasi oo waregeyska New York Post lagu daabacay, wuxuuna warqadda dardaaranka uu saxiixay 8-dda August.
Balse meelna laguma sheegin cidda deeqdaasi lacageed ka faa'ideysaneyso, lacagahaasi oo isugu jira $56 milyan oo doolar oo caddaan ah, hanti ma guurta ah oo u dhiganta $14 milyan oo doolar iyo $18 milyan oo doolar oo gaadiid iyo hanti kale lagu qiimeeyey.
Ninkan waxaa uu saddex jeer ka badbaaday xukun dil ah
Kumuu ahaa Jeffrey Epstein?
Jeffrey Epstein wuxuu ku dhashay magaalada New York wuxuuna ahaa macallin inta uu maalqabeen noqon. Inta dambiyada loo haysto lagu soo eedeyn wuxuu ahaa nin caan ku ahaa maalkiisaa iyo xiriirada ganacsi uu leeyahay.
Wuxuuna ahaa ninkaasi nin xiriirkiisa ganacsi uu u fududeeyey in shaqsiyaad caan ah oo ay ka mid yihiin Madaxweynaha Mareykanka ee hadda Donald Trump, Madaxweynihi hore Bill Clinton iyo Amiir UK Amiir Andrew uu la kulmo.
Wargeyska New York oo soo xiganaya madaxweyne Trump wuxuu Epstein uu ku tilmaamay "Shaqsi cabsi badan". Balse sanadkan wuxuu Mr Trump uu sheegay "inuusan ahayn taageerada Epstein".
Epstein maxaa lagu soo eedeeyey?
Epstein waxaa lagu soo eedeeyey inuu gabdhaha yaryar oo ay da'dooda ka hooseeyso 18 jirka ay galmo la sameeyaan iyo inuu tahriibiyey inta u dhaxeysay 2002 - 2005.
Waxaana xabsiga loo taxaabay 6-da July isaga oo diyaaraddiisa qaaska ah safar ku tagay New Jersey. Wuxuuna sida oo kale diiday dacwadda la xiriirta heshiisyo uu 2008-ddi si khaldan u galay, iyada oo marki dambe lagu helay dambi aad u yar.
Xeer-ilaaliyayaashu waxaa kale oo ay Epstein ku eedeeyeen inuu lacaga badan siiyey laba qof oo kiiska dacwadda loo haysto oo lagu wado iney sanadka dambe billaabato uga markhaati furtaan.